လူသား၏ချီးမြှောက်ခြင်း - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘုရားသခင့်ဘုရားကျောင်းဆွစ်ဇာလန်
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2021-02 > ချီးမြှောက်ခံရသောလူသား
နိကောဒင်နှင့် စကားပြောရာတွင် ယေရှုသည် သဲကန္တာရရှိမြွေနှင့် ကိုယ်တော်တိုင်ကြားတွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့်အပြိုင်ကို ဖော်ပြခဲ့သည်– “မောရှေသည် တော၌မြွေကို ချီမြှောက်သကဲ့သို့ လူသားကို ယုံကြည်သောသူမည်သည်ကား ထာဝရအသက်ကိုရစေမည်အကြောင်း၊ ယော 3,14-15) ။
အဲဒါက ယေရှု ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။ သခင်ယေရှုသည် ဣသရေလလူမျိုးများအကြောင်း ဓမ္မဟောင်းပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကို ရေးဆွဲခဲ့သည်။ အစ္စရေးလူတွေ သဲကန္တာရထဲမှာနေပြီး ကတိထားရာပြည်ကို မဝင်ရသေးဘူး။ သူတို့သည် စိတ်မရှည်၍ ညည်းညူကြသည်– “လူများတို့သည် လမ်းခရီးတွင် ငြီးငွေ့လာ၍ ဘုရားသခင်နှင့် မောရှေကို ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုလျက် ‘တော၌သေစေခြင်းငှါ ငါတို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ အဘယ်ကြောင့် နှုတ်ဆောင်ခဲ့သနည်း။ အကြောင်းမူကား၊ ဤအရပ်၌ မုန့်နှင့်ရေမရှိ၊ ဤနည်းသောအစာသည် ငါတို့ကို ရွံရှာ၏။"4. မောရှေ ၁1,4-5) ။
မန္တရားရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ဘာလဲ။ “လူအပေါင်းတို့သည် တူညီသောဝိညာဉ်အစာကိုစား၍ ဝိညာဉ်ရေးအစာကို အတူတူသောက်ကြပြီ။ သူတို့နောက်မှလိုက်သော ဝိညာဉ်ကျောက်ကို သောက်ကြ၍၊ ကျောက်ကား ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူ၏။"1. ကောရိန္သု 10,3-4) ။
ယေရှုခရစ်သည်ကျောက်၊ ဝိညာဉ်ရေးရာသောက်ရာဖြစ်သောကြောင့်သူတို့စားခဲ့သောဝိညာဉ်အစာကားအဘယ်နည်း။ ဘုရားသခင်သည်theသရေလတပ်တရှောက်လုံးကိုမန္နမုန့်ဖြစ်စေခြင်းငှါ၎င်း၊ ဒါဘာလဲ? ယေရှုသည်မန္နမုန့်ကိုကိုယ်စားပြုသည်၊ သူသည်ကောင်းကင်မှစစ်မှန်သောပေါင်မုန့်ဖြစ်သည်။ breadသရေလလူတို့သည်ကောင်းကင်မုန့်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုခဲ့ကြသလော၊
အဆိပ်ရှိသော တွားသွားသတ္တဝါများ လာ၍ ကိုက်သဖြင့် လူအများအပြား သေဆုံးကြသည်။ ကြေးဝါမြွေလုပ်၍ တိုင်ပေါ်တွင် တင်ရန် မောရှေအား ဘုရားသခင် ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ “ထို့​ကြောင့် မော​ရှေ​သည် ကြေး​ဝါ​မြွေ​ကို​လုပ်​၍ မြင့်​မြင့်​တင်​၏။ မြွေကိုက်လျှင် ကြေးဝါမြွေကို ကြည့်ရှု၍ အသက်ရှင်၏” (4. မောရှေ ၁1,9).
ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်မှာဘုရားသခင်ပေးသောအစီအစဉ်မှမဟုတ်ဘဲလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်၌တင်သောမျှော်လင့်ချက်မှဖြစ်သည်။ “ ချီးမြှောက်ခြင်း” ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည်သခင်ယေရှုကိုကားတိုင်တင်သတ်ခြင်းအတွက်ဖော်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလူသားအားလုံးနှင့်မကျေနပ်သောofသရေလလူမျိုးအတွက်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ကြေးဝါမြွေသည်Israelitesသရေလလူအချို့အတွက်ကာယရေးကုသမှုကိုဖြစ်စေသောသင်္ကေတတစ်ခုမျှသာဖြစ်ပြီးလူသားအားလုံးအတွက်ဝိညာဉ်ရေးကုသမှုပေးသောအဆုံးစွန်သောယေရှုခရစ်ကိုညွှန်ပြခဲ့သည်။ သေခြင်းမှလွတ်မြောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်သည်ဘုရားသခင်ပြုလုပ်ထားသောဤကြမ္မာကိုအာရုံစိုက်ခြင်းအပေါ်မူတည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သေခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်၍ ထာဝရအသက်ကိုရရန်ချီးမြှောက်ခံရသောလူသားကိုယုံကြည်ပြီးယုံကြည်ရမည်။ ဤသည်ကန္တာရတွင်Israelသရေလလူမျိုး၏လှည့်လည်သွားလာခဲ့သည့်အဖြစ်အပျက်တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောgဝံဂေလိတရားဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်ချစ်ရသောစာဖတ်သူကိုမြွေကိုက်ခြင်းခံရလျှင်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်၌မြှောက်ထားတော်မူသောဘုရားသခင်၏သားတော်ကိုကြည့်။ ယုံကြည်ပါ။ သို့ဖြစ်လျှင်ထာဝရအသက်ကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။